ओली मन्त्रिपरिषदका मेस्सी, रोनाल्डो र नेइमार भनिएकाहरु पनि उस्तै « News24 : Premium News Channel
ओली मन्त्रिपरिषदका मेस्सी, रोनाल्डो र नेइमार भनिएकाहरु पनि उस्तै
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल सुरु हुन अघि लियोनल मेस्सी, क्रिष्टियानो रोनाल्डो र नेइमार जुनियर सबैभन्दा चर्चामा थिए । तर उनीहरुबाट अपेक्षाकृत प्रदर्शन हुन नसक्दा आम फुटबल प्रेमी निराश बने । अहिले नेपालमा पनि यही चर्चा बढी हुने गरेको छ । तर यो चर्चा अहिले नेपाली राजनीतिसंग जोडिएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलसंग जोडिन पुगेको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यहरुलाई नेपाली जनताले मेस्सी , रोनाल्डो र नेइमारसंग नै तुलना गरेका थिए । तर उनीहरुको अहिलेसम्मको प्रदर्शन पनि रुस विश्वकपमा मेस्सी,रोनाल्डो र नेइमारको जस्तै भएको चर्चा हुने थालेको छ । ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा,सरकार गठनको पहिलो हाफ थियो त्यसमा लालबाबु पण्डितलाई सपथ ग्रहण गराइयो । जनताले मन्त्री पण्डितबाट धेरै नै अपेक्षा गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा पण्डितको हाईहाई थियो ।
उनी नेपाली राजनीतिका मेस्सीजस्तै बने एक महिनासम्म । तर, अहिले मन्त्री पण्डितको अवस्था खेल हारेका मेस्सीको जस्तै बनेको छ । कर्मचारीहरुलाई गाली गरेर मिडियामा प्रस्तुत हुनुबाहेक अहिलेसम्म केही गर्न सकेका छैनन उनले । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्का चर्चित पात्र हुन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । गैरराजनीतिक विज्ञ समूहबाट मन्त्री बनाइएको र उनले अर्थशास्त्रको खेलको नियम बुझेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो छनोट गरेको बुझाइ आम जनमानसमा थियो । तर, बजेट घोषणा हुँदासम्म अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको हालत रोनाल्डोको जस्तै बन्न पुगेको छ । शारीरिक हिसाबले रोनाल्डोजस्तै कदका अर्थमन्त्रीले राजनीतिक जिम्मेवारीमा त्यो उचाइ हासील गर्न सकेनन् ।
त्यसैगरी ओली सरकारमा सहभागी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारी पनि आशा गरिएका युवा नेता हुन । उनी पनि ओली सरकारमा खेल हारेका मेस्सी वा नेइमार जस्तै भएका छन । तर, अधिकारीले पनि आफूलाई काबिल मन्त्री सावित गर्न सकिरहेका छैनन् । यसविपरीत मन्त्री अधिकारीले विभिन्न संस्थालाई जथाभावी रुपमा रकम बाँडेको विषय चर्चा छ अहिले । अर्का युवा नेता एवं श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि मेस्सी र रोनाल्डोजस्तै आशा गरिएका पात्र हुन् ।
तर, उनी यतिबेला सोचेको भन्दा निकै नै कमजोर खेल खेलिरहेका छन् । यहाँ सबै मन्त्रीहरुको व्यक्ति पिच्छे चर्चा गरेर साध्य छैन । कतै टीमका कप्तान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीचैमा यी चर्चित भनिएका खेलाडीहरुलाई सब्स्टिच्युट नै गर्ने त होइनन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।